अण्डकोषमा हथौडा प्रहार गरी श्रीमानको हत्या ! « MNTVONLINE.COM
अण्डकोषमा हथौडा प्रहार गरी श्रीमानको हत्या !
काठमाडौँ । नवलपरासी पूर्वमा श्रीमानको हत्या अभियोगमा एक महिलासहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । श्रीमानको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सोमबार उनकी ३८ वर्षीया श्रीमती फु्ूलमाया सुगुरपाक र सोही ठाउँका ४० वर्षीय मेखबहादुर सुनारी मगरलाई पक्राउ गरेको हो । उनको असार २० गते राति हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । गैंडाकोट नगरपालिका–१८, हुर्चिल बस्ने ४२ वर्षीय धनबहादुर सुगुरपाक मगर असार २० गतेदेखि बेपत्ता थिए ।
यसरी भएको थियो धनबहादुरको हत्या
धनबहादुर नहुँदा फूलमायासँग मेखबहादुरले भेटिरहेको थाहा पाएका गाउँलेले पनि धनबहादुरलाई सुनाए । गाउलेले धनबहादुरलाई श्रीमतीको चालचलन खासै निको नभएको सुनाएपछि उनी आक्रोसित भएका थिए । श्रीमान-श्रीमतीबीच कहिलेकाहीँ सोही विषयमा झगडा हुन्थ्यो ।
मेखबहादुरसँगको सम्बन्धबाट चिढिएका धनबहादुरले श्रीमतीलाई भन्न थाले् अब यो मेखबहादुरलाई म छाड्दिनँ, यसमा तँ पनि पर्छेस् । प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार दुबैबीचको सम्बन्धबारे धनबहादुरले शंका गर्न थालेपछि फूलमाया जति आत्तिन थालिन्, मेखबहादुरलाई पनि पिरलो उतिकै भयो । मेखबहादुरले फूलमायालाई उक्त सम्बन्धबारे कुरा बाहिर नआउँदै धनबहादुरलाई ‘सिध्याउनु पर्ने’ योजना सुनाए ।
उनको योजनामा साथ दिँदै फूलमायाले अनुकूल समय खोज्न थालिन् । २०७६ असार १९ गते राति श्रीमान् सुतिसकेको मौकामा मेखबहादुरलाई बोलाइन् । राति १२ बजेको थियो । मेखबहादुर र फूलमायाले सुतिरहेका धनबहादुरको अण्डकोषमा सुरूमा हथौडा प्रहार गरे । प्रहारबाट धनबहादुर बेहोस् भएपछि दुबैले घाँटीमा डोरीले कसे । धनबहादुरको प्राण उडेपछि दुबै शव व्यवस्थापनमा जुटे ।
फूलमायाले धनबहादुरलाई डोको दिइन् । मेखबहादुरले धनबहादुरको शव डोकोमा हालेर हिँडे । पछिपछि फूलमाया कोदालो बोकेर लागिन् । घरभन्दा झन्डै तीन किलोमिटर सुन्दरी सामुदायिक वनभित्र धनबहादुरको लास पुर्‍याए । त्यहीँ खाल्डो खनेर धनबहादुरको शव पुरेर व्यवस्थापन गरे ।
यो अनुसन्धानले परपुरुष र परस्त्रीबीचको सम्बन्धले हत्या निम्त्याएको देखाएको छ । दुवैले बयानमा हत्या स्वीकार गरिसकेका छन् । प्रहरीले सोमबार सुन्दरी सामुदायिक वनमा धनबहादुरको शव पुरेको ठाउँ उत्खनन् गर्‍यो । मेखबहादुर र फूलमायाले बताएको ठाउँमा उत्खनन् गर्दा धनबहादुरको कंकाल फेला परेको छ ।
‘हामीले पाँच फिट गहिरो, पाँच फिट चौडाइ र छ फिट लम्बाइमा खोतल्दा कंकाल फेला पार्‍यौं,’ प्रहरी निरीक्षक थापाले भने, ‘यो कंकाल परीक्षणपछि मात्र बाँकी अनुसन्धान अघि बढ्दैछ ।’ प्रहरीले सो कंकालको डिएनए परीक्षणका लागि धनबहादुरका आमाबाबुबाट रगत झिकेको छ ।
‘डिएनए प्रोफाइलिङ सकिएपछि यो हत्याको अन्तिम अनुसन्धान सकिन्छ,’ थापाले भने । पक्राउ परेका दुवैजनालाई कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा चलाइएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बहिनीलाई चकलेट खान दिएर दिदी बलात्कार !